एकता अड्किरहँदा प्रचण्ड नेपाल भेटवार्ता- के कुराकानी भयो ? – YesKathmandu.com
एकता अड्किरहँदा प्रचण्ड नेपाल भेटवार्ता- के कुराकानी भयो ?
मङ्गलबार ०१, जेठ २०७५
काठमाडौँ । पार्टी एकीकरणको बारेमा विभिन्न थरी अड्कलबाजी भइरहेका बेला माओवादी केन्द्रका अधयक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवुकर नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ ।
ललितपुरस्थित एमाले वैदेशिक मामिला विभागको कार्यालय, तुल्सीलाल स्मृति भवनमा मंगलबार बिहान प्रचण्ड र नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा दुई पार्टीबीचको पार्टी एकीकरणका विषयमा छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ । वार्तामा नेता नेपालले पार्टी एकता प्रक्रियाबारे निराशाजनक अवस्था अन्त्य गर्न प्रचण्डलाई आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ । अनावश्यक आशंका पालेर एकता नटार्न आग्रह गरिएको नेता नेपाल निकट स्रोतले जनाएको छ ।
भेटमा प्रचण्डले ओलीका पछिल्लो क्रियाकलाप र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणपछिको अवस्था विश्लेषण गर्दै एकताका लागि विश्वासको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतको दावी छ । एमाले नेता नेपालले भने दुई नेताबीचमात्र कुरा हुँदा पार्टी एकताबारे कार्यकर्ता प्रष्ट नहुने र अन्यौल बढ्ने भन्दै संयोजन समिति बैठकमा छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो समय भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपश्चात अरुण तेश्रो आयोजनालगायत विविध विषयमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच तिक्तता बढ्दै गईरहेको छ । जसले गर्दा पार्टी एकतामा समेत असर परेको र अघोषित रुपमा पार्टी एकता प्रक्रिया स्थगन भईसकेका कुराहरु बाहिर आईरहेका छन् ।
यही विवाद र तिक्तताका बीच भएको माधवकुमार र प्रचण्डको भेटघाटलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
फोरम चाँडै सरकारमा सहभागी हुन्छ — नेता श्रेष्ठ
पूर्वखेलाडी मणि शाहको पार्थीव शरीर रंगशालामा
बिद्यादेवी भण्डारीकाबिरुद्ध कुमारी लक्ष्मी राईलाई कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेद्धार बनायो
अख्तियार उजालेर मलाई कु गर्न खोजिएको थियो, कांग्रेस मन्त्रीले बचाए
दिल्लीले बोलायो मधेसी मोर्चाका सात नेतालाई
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ३ असोज साँझ राजीनामा दिने
राहत वितरण बन्यो भोट माग्ने काइदा, एकद्धार नीतिकै उल्लङ्घन
प्रदेशसभाका समानुपातिक सांसद टुंग्याउन राजपाको बैठक
अर्थमन्त्री महरा नफर्कदै माधव नेपाललाई किन बोलायो चीनले ?
विधुवा राष्ट्रपति छिर्दा अपवित्र जानकी मन्दिर ‘विदुर राष्ट्रपति’ छिर्दा कसरी पवित्र ?
आफ्नै चिह्नमा चुनाव लड्ने कि गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने ?
वाम गठबन्धनले सरकार गठन बारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै